६ सय परीक्षा शुल्कमा जेभियर इन्टरनेशनल कलेजले ४ हजार रुपैयाँसम्म असुल्छ ! « NBC KHABAR
६ सय परीक्षा शुल्कमा जेभियर इन्टरनेशनल कलेजले ४ हजार रुपैयाँसम्म असुल्छ !
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ र १२ को परीक्षा शुल्क ६ सय रुपैयाँ तोकेको छ । त्रिभूवन विश्वविद्यालयले पनि स्नात्तक तहको परीक्षा शुल्क ६ सय नै तोकेको छ । तर, निजी कलेजले त्यसको ६ गुणाभन्दा बढी असुलिरहेका छन् ।
विश्वविद्यालय र बोर्डको निर्देशन वेवास्ता गर्दै कलेजहरुले तीन हजार चार सयदेखि चार हजारसम्म परीक्षा शुल्क लिइरहेका छन् । ट्वान्टी–फो ‘हेल्प डेस्क’मा प्राप्त गुनासोका आधारमा एक रिपोर्ट तयार पारिएको छ ।
यो काठमाडौं कालोपुलस्थित जेभियर इन्टरनेशनल कलेजले जारी गरेको रसिद । शीर्षक नखुलाइएको रसिदमा ३ हजार ४ सय ५ रुपैयाँ लेखिएको छ । विद्यार्थीका अनुसार यो कक्षा १२ को परीक्षा शुल्क तिरेको रसिद हो ।
यस्तै, यो जेभियरले नै जारी गरेको अर्को रसिद । वीवीए तेस्रो वर्षको परीक्षा दस्तुर तिरिएको रसिद हो यो । विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा शुल्क ६ सय रुपैयाँ तोकेको छ । पहिलो पटक निर्धारित म्यादमा परीक्षा फारम नभरे दोस्रो पटक दोब्बर दस्तुर अर्थात् १ हजार २ सय रुपैयाँ तिरेर भर्न पाइन्छ । त्यसबाहेक शुल्क लिन पाइँदैन । तर, अधिकांश निजी कलेजले आफूखुसी परीक्षा शुल्क तोकेर पैसा उठाइरहेका छन् । त्यसको एक उदाहरण जेभियर कलेज नै हो । यसबारे कुरा उठाउँदा गल्ती स्वीकार्नु त कता हो कता कलेज प्रशासनले विद्यार्थीलाई नै धम्क्याउँछ ।
तीन हजार पाँच सयदेखि चार हजारसम्म परीक्षा शुल्क लिएको हाकाहाकी स्वीकार्ने जेभियर कलेजका निर्देशक लोकबहादुर भण्डारी यसबारे औपचारिक रुपमा बोल्न मानेनन् । जेभियरकै जस्तो मनोमानी देशैभरका कलेजले गरेका छन् । तर, उनीहरुलाई लगाम लगाउने ल्याकत सरकारी निकायसँग छैन । उता, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अनुगमनको जिम्मेवारी कानूनतः स्थानीय तहमा रहेकाले यसमा आफूले केही गर्न नसक्ने बताउँछ । भने विश्वविद्यालय यस विषयमा अविगे छ ।
स्थानीय सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान नदिँदा विद्यार्थी मारमा परिरहेका छन् भने निजी कलेजको मनोमानी बढिरहेको छ । हरेक शीर्षकमा पैसा असुल्न माहिर यस्ता कलेजलाई कसले निगरानी गर्ने ?